iWatermark IFomu yoQhagamshelo | Plum emangalisayo
Ukugcina ixesha le-allones ukuba unemicimbi okanye umbuzo nceda ulandele la manyathelo alandelayo ngezantsi kuqala:
1. Khuphela inguqulelo yamvanje. Iipesenti ezingama-90 zexesha oku kusombulula nayiphi na ingxaki.
2. Nceda uqinisekise ukuba impendulo ayikabi lelona lisemagqabini ngezandla.
3. Ukuba uneziphakamiso, umbuzo okanye umbuzo ke sithumele impendulo yakho.
Sifuna iinkcukacha zokukunceda. Kufuneka sivelise ingxaki evela kwinkcazo yakho ukuze iinkcukacha, iifoto kunye nezikrini zisincede siqonde. Ukwenza umfanekiso kwi-iOS, bamba iqhosha lamandla kunye neqhosha lasekhaya ngaxeshanye, isikrini siya kukhanya kwaye sibeke skrini kwi-albhamu yekhamera.
Asinakuthembisa ukuba siza kuphendula kodwa sifunda yonke ingxelo kwaye siyisebenzise ukuphucula nokongeza amanqaku kwisoftware yethu. Ke ukuba uxela ibug okanye ucela inqaku kungenzeka ukuba ilungiswe kuhlobo olulandelayo enkosi.
Yiya apha ufuna inkxaso